खेल पर्यटन के हो पत्ता लगाउनुहोस् र कहाँ गर्ने यात्रा समाचार
El खेल पर्यटन यात्रा को अर्को तरीका भएको छ त्यो झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। विश्वव्यापीकरण, सुधारिएको सञ्चार र कम यातायात लागतहरूको लागि पर्यटनका रूपहरू द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदैछन्, जसको अर्थ आज हामीसँग विभिन्न ठाउँहरू भ्रमण गर्ने विभिन्न कारणहरू छन्, जुन पर्यटनको विश्वलाई बढी विविधीकरण गर्दछ। सुदूर समुहका यात्राहरू समुद्री किनार क्षेत्रमा हुने वा शहरहरूमा निश्चित पोइन्टहरू हेर्न योजना गरिएको छ।
आज पर्यटनको संसार साँच्चिकै विविध छ र स्वतन्त्र छ त्यहाँ त्यो खेल पर्यटन उत्पन्न भएको छ, एक अभ्यास जुन धेरै चाखलाग्दो छ र त्यो यात्राको लागि एक महान प्रेरणा बन्न सक्छ। हामी हेर्ने छौं कि यस खेलकुद पर्यटनले के समावेश गर्छ र हामी कसरी यस प्रकारको पर्यटन पूरा गर्न सक्छौं वा कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर हेर्न जाँदैछौं।
1 खेल पर्यटन भनेको के हो?
2 खेल पर्यटनका प्रकारहरू
3 म्याराथन चलाउनुहोस्
5 स्की गर्न ठाउँहरू
6 सर्फिंगका लागि खेल पर्यटन
7 घटनाक्रम र खेलकुद पर्यटन
खेल पर्यटन भनेको के हो?
खेलकुद पर्यटन हो पर्यटन को प्रकार जुन खेलमा केन्द्रित छ। तपाईं च्याम्पियनशिप वा खेल हेर्न यात्रा गर्नुहुन्छ। यो खेल खेल्न यात्रा गर्न पनि सामान्य कुरा हो, जस्तै कुनै विशिष्ट पैदल यात्राको मार्ग लिने वा समुद्रीतटमा च k्गा वा सर्फ गर्ने काम जुन यो विशेष गरी यसको लागि राम्रो हो। खेलकुद पर्यटन आज फस्टाउँदैछ किनकी यो पहिलेको भन्दा साना ट्रिपहरू लिनको लागि अधिक किफायती छ। यसैले त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन केहि दिन खेल हेर्न वा साधारण मनोरन्जनको लागि खेल खेल्न यात्रा गर्दछन्। यो यात्रालाई हेराइको अर्को तरीका हो, एक खेलमा केन्द्रित जुन हामी मनपराउँछौं र शौकमा। अब यात्राहरू आराम, उम्कने वा सांस्कृतिक भ्रमणहरू भन्दा पर जान्छन्।
खेल पर्यटनका प्रकारहरू
खेलकुद पर्यटन धेरै प्रकारका हुन सक्छ। हामी सक्छौ पहाडी क्षेत्रमा स्की जानुहोस्, पैदल यात्रा मार्ग लिनको लागि वा शहरमा म्याराथनमा जानको लागि, किनकि त्यहाँ धेरै जना प्रसिद्ध छन्। अर्कोतर्फ, त्यहाँ खेलकुद पर्यटन गर्ने केही खास कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर विशेष गरी फुटबल खेलहरूमा स्पेन वा यूरोपभरि हुने सोकर वर्ल्ड कप वा युरोपियन कप जस्ता घटनाहरू हुने गर्दछन्।
त्यहाँ धेरै भागहरू छन् जहाँ हामी दौडन सक्छौं, १० किलोमिटरदेखि आधा म्याराथन वा पूर्ण म्याराथनसम्म। तर यी मध्ये केही म्याराथनहरू, जसका लागि सयौं व्यक्ति तयार छन्, वास्तवमै प्रसिद्ध छ। न्यु योर्कमा एक ती मध्ये एक हो, तर त्यहाँ एक बोस्टन, पेरिस वा बर्लिनमा छ। यी ठूला घटनाहरू ठूला शहरहरू जस्ता स्थानहरूमा हुने गर्दछन् र ती घटनाहरू हुन् जसमा सहभागी हुनको लागि यो धेरै अनुभव हो। तर तपाईं म्याराथनको kilometers२ किलोमिटर दौड्नको लागि तयार हुनुपर्दछ।
त्यहाँ स्थानहरू छन् जहाँ चढाईको रूपमा मांगको रूपमा खेलहरू गर्न चाहनेहरू छन्, जसलाई विशेषज्ञताको एक महत्त्वपूर्ण स्तर आवश्यक छ, जानुहोस्। स्पेनमा हामीसँग ठाउँहरू छन् उदाहरणका लागि नारन्जो डे बुल्नेस, जुन एक महान ठाडो भित्ता छ। अन्य अविश्वसनीय स्थानहरू क्यानाडाको माउन्ट असगार्ड हो, बरफ र हिउँको वातावरणमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको योसेमाइट, एउटा ठूलो ढु stone्गाको पर्खालसँग आरोहण गर्न। अर्जेन्टिनाको प्याटागोनियामा हामी अचम्मका पहाडहरू पनि पाउँछौं जुन कुनै पर्वतारोहीको सपना हो।
स्की गर्न ठाउँहरू
स्पेनमा हामीसँग ठूलो स्की रिसोर्टहरू छन्, त्यसैले त्यहाँ जाडो टुरिस्ट धेरै छ। उदाहरण को लागी, हामी संग स्टेशनहरु छ Lleida मा बाकिरा बेरेट, धेरै प्रख्यात र अनन्य, सुन्दर Aran घाटीमा अवस्थित। योसँग १ marked० किलोमिटर चिह्नित ट्र्याकहरू छन्। अर्को स्की रिसोर्ट ह्युस्का, फर्मिगलमा छ, ठूलो युवा वातावरणको साथ। सबैभन्दा प्रसिद्ध अर्को ग्रेनाडा मा सियरा नेवादा छ, परिवारहरु को लागी धेरै लोकप्रिय। स्पेन बाहिर बाहिर अन्य ठाउँहरू छन् जस्तै फ्रान्समा चमोनिक्स, स्विजरल्याण्डको जर्मेट वा पोर्तिल्लो, चिलीमा।
सर्फिंगका लागि खेल पर्यटन
पानी खेलकुदको अभ्यास व्यापक छ र त्यहाँ ठाउँहरू छन् जहाँ तिनीहरू लगभग सबै वर्ष भर गर्न सकिन्छ। स्पेनमा हामीसँग ठाउँहरू छन् भिज्कायामा मुन्डका बीच, फेरोलमा पान्टेन समुद्र तट वा ए कोरुआमा रजो, ती सबै उत्तरमा। त्यहाँ अरू पनि छन् टापुहरू जस्तै, लान्जारोटेमा एल क्विमाओ जस्ता स्थानहरूमा। दक्षिणी क्षेत्रमा हामीले Cádiz जस्ता ठाउँहरू भेट्यौं जुनसँग धेरै समुद्र तटहरू छन् जहाँ तपाईं तिनीहरूको महान अवस्थाको कारण यस प्रकारको खेलकुद गर्न सक्नुहुन्छ।
घटनाक्रम र खेलकुद पर्यटन
त्यहाँ केहि घटनाहरू छन् जुन सँधै धेरै नै प्रसिद्ध हुन्छन्। प्रमुख फुटबल खेलको फाइनलहरू जस्तै विश्व कप वा कपहरू विभिन्न स्थानहरूमा खेलिने घटनाहरू हुन्। त्यहाँ पनि छ विम्बल्डन वा अरू जस्तै टूर डे फ्रान्स, यदि हामी साइकल चलाउन चाहन्छौं, जुन फ्रान्सको धेरै क्षेत्रहरू, वा स्पेनको साइक्लिling्ग टुर द्वारा अनुसरण गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » खेल पर्यटन